अष्ट्रेलियाको तीज धमाकामा सिन्धु र चन्दा :: The First Nepali Magazine Published in Australia
अष्ट्रेलियाको तीज धमाकामा सिन्धु र चन्दा
-- नेपाली टाइम्स अस्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : शनिबार, साउन ७, २०७४
तीज आउन अझै केही साता बाँकि छ, यद्धपि शहरमा तीजका गीतहरू गुञ्जन थालिसकेका छन् । टेलिभिजनको पर्दादेखि यूट्युब च्यानलहरूमा यो वर्षका तीज विशेष गीतहरू प्रसारण हुन थालिसकेका छन् । नेपालमा मात्र होइन, नजिकिँदै गरेको तीजले विदेशमा बसोबास गर्ने महिला दिदी–बहिनीहरूलाई समेत बिस्तारै व्यस्त बनाउन थाल्दैछ । तीजको अवसर पारेर अष्ट्रेलियामा समेत तीज विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिंदैछ । अष्ट्रेलियाका पाँच वटा शहरमा आयोजना हुने ‘तीज धकामा–२०१७’ शीर्षकको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन दुई लोकप्रिय गायिकाहरू सिन्धु मल्ल तथा चन्दा अर्याल अष्ट्रेलियामा पुग्दैछन् । ‘तीज धमाका’ कार्यक्रम जुलाई २३ मा मेलवर्नमा, जुलाई २९ मा सिड्नीमा, जुलाई ३० मा अरेञ्जमा, अगष्ट ३ मा एडिलेडमा तथा अगष्ट ५ मा ब्रिसबेनका सम्पन्न हुनेछ । यी कार्यक्रममा अष्ट्रेलियामै बसोबास गर्ने नेपाली कलाकारहरू पनि सहभागि हुँदैछन् । सिन्धु मल्ल तथा चन्दा अर्याल भने यी सबै कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणको रुपमा रहनेछन् । अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा सक्रिय रहेका यी दुई गायिकासंग द नेपाली टाइम्स अष्ट्रेलियाका नेपाल प्रतिनिधि कृष्ण भट्टराईको सेलिब्रेटी टक :
अष्ट्रेलियाको तीज धमाका विशेष हुनेछ ।
सिन्धु मल्ल, गायिका
अष्ट्रेलियामा आयोजना हुने ‘तीज धमाका–२०१७’ कार्यक्रमको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
तीजको अवसर पारेर आयोजना हुन लागेको कार्यक्रमको लागि यतिबेला अन्तिम तयारीमा सक्रिय छु । विभिन्न पाँच शहरमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि नेपालबाट त्यहाँ बसोबास गर्नु हुने नेपाली दिदी–बहिनीहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु ।
तीज धमाकामा कस्ता गीत गाउँदै हुनुहुन्छ ?
तीज विशेष कार्यक्रम भएकाले मैले गाएका तीजका लोकप्रिय गीतहरू गाउने छु । कतिपय पुराना गीतहरू प्रस्तुत गर्नेछु भने कतिपय नयाँ गीतहरू पनि गाउने छु ।
तेस्रो पटक अष्ट्रेलिया पुग्दै हुनुहुन्छ, यसपटकको भ्रमणका लागि कत्तिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ ?
विदेशमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि हामी नेपाली कलाकारहरू प्राय: एक्साइटेड नै हुन्छौं । त्यसमा पनि नेपाली कलाकारहरूलाई असाध्यै माया गर्ने अष्ट्रेलियाको नेपाल समुदायसमक्ष प्रस्तुत हुन पाउँदाको उत्साहको त वर्णन नै गर्न सक्दिन । म पाँचै वटा शहरका तीज धमाका कार्यक्रमका लागि असाध्यै एक्साइटेड छु ।
तीजका कार्यक्रममा नेपाली दर्शकहरूको सहभागिता कस्तो पाउनु हुन्छ ?
तीज महिलाहरूका लागि विशेष पर्व हो । हामी सहभागि हुने तीज धमाका कार्यक्रममा नेपाली महिला दिदी–बहिनीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहने अनुमान गरेकी छु ।
यहाँबाट उहाँहरूलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
यो पत्रिका पढिरहनु भएको अष्ट्रेलिया निवासी सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूलाई हामी सहभागि हुने कार्यक्रममा राम्री भएर, चिटिक्क परेर, कम्मर मर्काउने गरी आउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
केही वर्ष सांगीतिक क्षेत्रबाट ओझेल पर्नु भयो नि ?
ओझेल नै त परेको होइन, तर गीत गाउने संख्यामा केही कमि चाहिँ भएकै हो । म व्यवसायमा समेत आवद्ध भएकाले पूर्ण रुपमा संगीतमा समय दिन सकिरहेकी छैन । यद्धपि मैले तीजको बेला भने नयाँ–नयाँ गीतहरू गाइरहेकी छु ।
यो वर्षको तीज गीत कस्तो बनेको छ ?
यसपटक मैले एक नारायण भण्डारीको शब्द तथा सुदाम थापाको संगीतमा ‘घिन घिन मादल बजाउँदै…’ शीर्षकको गीत गाएकी छु । भरखरै यो गीतको म्युजिक भिडियोको छायांकन पनि सम्पन्न भएको छ । केही दिनमै यो गीतले दर्शकहरूको मन जित्ने छ ।
म्युजिक भिडियो चाहिं कस्तो बनेको छ ?
दुई लोकप्रिय अभिनेत्रीहरू वर्षा शिवाकोटी तथा वर्षा राउतले छमछमि नृत्य गरेको म्युजिक भिडियो निकै आकर्षक बनेको छ । निर्देशक सुव्रत आचाय तथा कोरियोग्राफर गम्भिर विष्टले झन्डै ३० जना कोरस सहित नौलो शैलीको म्युजिक भिडियो तयार पार्नु भएको छ ।
अष्ट्रेलिया पहिलो पटक भएकाले एक्साइटेड छु ।
चन्दा अर्याल, गायिका
तीज गीत गाउन थाल्नु भएको कति भयो ?
म विगत छ वर्षदेखि तीजका गीत गाइरहेको छु । झन्डै ८ वटा तीजका गीत गाइसकेकी छु ।
कुन–कुन तीज गीत लोकप्रिय भएका छन् ?
प्राय: सबै गीतहरू नै स्रोता तथा दर्शकले मन पराउनु भएको छ । खासगरि लचक्कै कम्मर तथा मेरो रुपैले भन्ने गीत अत्यधिक लोकप्रिय छन् ।
यो वर्षको तीजका लागि के गाउनु भएको छ ?
यसपटक मैले सिंगल ट्रयाकको रुपमा ‘ओहो महादेव’ गाएकी छु । चाँडै नै यो गीतको म्युजिक भिडियो पनि तयार पार्दैछु । वसन्त सापकोटाको संगीत तथा बाबुराम बोहोराको शब्दमा राम्रो तीज गीत बनेको छ ।
विदेशका कार्यक्रममा कत्तिको सहभागि हुनु भएको छ ?
मैले कतारमा तीन पटक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेकी छु । यसबाहेक जापान, बहराइन, दुबई तथा भारतमा समेत सांगीतिक प्रस्तुती दिएकी छु ।
अष्ट्रेलियाको तीज धमाकाको तयारी कस्तो छ ?
म पहिलो पटक अष्ट्रेलिया पुग्न लागेकीले तीज धमाकाको तयारी पनि धमाकेदार नै गर्दैछु । म अष्ट्रेलियावासी दिदी–बहिनीहरूलाई तीजका गीतमा नचाउन आतुर छु ।
दर्शकहरूको कस्तो साथको आशा गर्नु भएको छ ?
अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले नेपाली कलाकारलाई असाध्यै माया गर्नु हुन्छ भन्ने सुनेकी छु । हाम्रो तीज धमाका कार्यक्रममा उहाँहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहनेछ भन्ने कुरामा ढुक्क छु ।
कति वटा गीत प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नु भएको छ ?
समय हेरेर झन्डै एक दर्जन तीज गीत प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेकी छु ।
गीतकार अम्बिका गुरुङको शब्दमा रमेशको सुपर ग्लू (भिडियो)
सिड्नीमा अभुतपुर्व फेशन शो हुदै
सगरमाथा आरोहणमा कामीरिताको नयाँ कीर्तिमान
सोलुखुम्बु- साहसिक आरोही कामीरिता शेर्पाले २३औँ पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल...
१०० वर्षमा सत्यमोहन जोशी
काठमाडौं- उही पुरानै मयल रङको टोपी, दौरा सुरुवालमाथि कोट, अनि सधैँ लगाउने...
जनकपुर विश्वका लागि नै प्रेरणा स्रोत होः राष्ट्रपति
जनकपुर- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जानकी महोत्सवले नेपालको सामाजिक सांंस्कृतिक समन्वय, राष्ट्रिय एकता...
प्रम ओली कम्बोडियामा
कम्बोडिया- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई दिनको औपचारिक भ्रमणका लागि आज कम्बोडिया अधिराज्य...
प्रम ओलीबाट विश्व समुदायलाई लुम्बिनी भ्रमण गर्न आह्वान
भियतनाम- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्व समुदायलाई नेपाल भ्रमण गर्न आह्वान...
गल्कोट समाज अस्ट्रेलियाको बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
नेपालको बाग्लुंग जिल्लामा अवस्थिति गल्कोट क्षेत्रबाट अस्ट्रेलियामा रहनु भएको गल्कोटेहरु बिच चार बर्ष...
जव मुलुक एउटा तिब्र प्रतिस्पर्धापूर्ण निर्वाचनमा होमिन्छ तब दलहरु जनमत आफु तिर...
अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरूले पहिलोपटक ‘ब्ल्याक होल’ को तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् । इभेन्ट...
कस्तो हुन्छ फाइभजी ?
दक्षिण कोरिया फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याएर विश्वकै पहिलो फाइभजी नेटवर्क प्रयोग गर्ने...